Etazonia, UK, Frantsa ary Alemana dia manentana ny olom-pireneny handao an'i Etiopia izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba an'i Ethiopia » Etazonia, UK, Frantsa ary Alemana dia manentana ny olom-pireneny handao an'i Etiopia izao
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba an'i Ethiopia • Vaovao farany Brezila • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Etazonia Vaovao Vaovao
Nanoro hevitra mafy ny vahiny hiala tao Addis Abeba
Nipoaka ny ady amin'izao fotoana izao tany Etiopia Avaratra herintaona lasa izay, rehefa nanao hetsika ara-miaramila tamin'ny vondrona mpikomy mpisintaka, ny Tigray People's Liberation Front (TPLF) ny governemanta federaly.
Ao anatin'ny tahotra ny handrosoan'ny mpikomy ny renivohitra Etiopiana, Addis-Abeba, governemanta tandrefana maromaro no manery ny olom-pireneny hiala haingana araka izay azo atao.
Namoaka fanambarana misaraka androany ny minisitry ny raharaham-bahiny Alemana sy ny masoivoho frantsay any Addis Abeba, izay nanoro hevitra ny olom-pireneny mba hiala tsy misy hatak'andro. Etazonia sy Royaume-Uni vao haingana no namoaka tolo-kevitra mitovy amin'izany ho an'ny olom-pireneny.
The United Nations (UN) dia nanamafy ihany koa fa miasa ny 'hamindra vonjimaika' ny fianakavian'ny mpiasa iraisam-pirenena avy ao Etiopia noho ny fiharatsy ny toe-draharaha eo amin'ny tany.
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, mpiasa Etiopiana 22 no nosamborina sy nosamborin'ny tafi-panjakana nandritra ny fanafihana tao Addis-Abeba mikendry ny Tigrayans foko, hoy ny ONU. Nafahana ny sasany tatỳ aoriana.
Ny vondrona, izay nitondra ny firenena nandritra ny taona maro talohan'ny nanonganana tamin'ny taona 2018, dia nahavita nifehy indray ny ankamaroan'ny faritra avaratr'i Tigray, tao anatin'ny volana vitsivitsy izay, anisan'izany ny renivohitra Mekele. Tamin'ny talata, nilaza ny TPLF fa nifehy an'i Shewa Robit izy ireo ary nitohy hatrany Addis-Abeba, sahabo ho 220 km (136 kilaometatra).